Adeegsiga erayga “Wahhabi”
Mahad Allaa leh, nabi Muxamed naxariis iyo nabad galyo dushiisa ha ahaato.
Waxaan damcay inaan wax ka iraahdo qoraalkii Fahad iyo qaabka loo adeegsado erayga wahhabi. Isticmaalka erayga wahhabi waayadaan dambe wargeysyada & idaacadaha caalimka ayuu ku badnaa. Waxaan ogsoonahay in waqti walba ay jiraan magacyo soo baxa. Magacyadaas badankood waxaa bixiya dad ujeedadoodu kala duwan tahay, qaarkood doonaya inay kala soocaan ummada, qaarna ixtiraam daro iyo dhaliil doon, qaar kalena ujeedo qarsoon oon kheyr ka dambeyn wata.
Xiligii dagaalada waxaan maqli jirnay erayada mooryaan, iyo dayday oo laga wado kuwa hantida dadka xaalufiya, maanta eraygaas waxaa loo adeegsadaa sidii taariko lagu aqoosado dadyow gaar ah. Sidoo kale, isticmaalka erayga midgaan shalay caan buu ka ahaa Soomaalida dhexdeeda, balse maanta waa ceeb ama ixtiraam daro.
Goor dhoweyd ayaan ku garaacay bogga google erayga wahhabi waxaa ii soo baxay dhowr bog oo badankood xambaarsan macno tusaya, qof Islaamka si adag u haysta, ama, qof Muslim xag jir ah, ama, qof Muslim ah oo lid ku ah dimiqoraadiyada iyo il baxnimada aduunka, ama Muslim dagaal kula jira Muslimiinta qun yar socodka ah. Sidoo kale, qaamuuska internetka yaan ka eegay waxayna ku macneeyeen sidatan:
n : a member of a strictly orthodox Sunni Muslim sect from Saudi Arabia; strives to purify Islamic beliefs and rejects any innovation occurring after the 3rd century of Islam; "Ossama bin Laden is said to be a Wahhabi Muslim" [source: dictionary.com]
Micnahaan ayaa cadeynaya in Wahhabi la yiraahdo qof ama dad Sunni Muslim asal raac ah, si adag diinta u haysta oo diidan bidcada lagu saa'idiyey diinta. Waxaa kaloo micnaha ka muuqda in wahabbi loo yaqaan qeyb Sunni Muslim ka mid ah kana soo jeedda wadanka Sacuudiga.
Waxaan oran karaa macnaha erayga iyo isticmaalkiisa wey kala duwanaan karaan. Hadba dhankii la doono ayaa loo qaadi karaa. Xumaan iyo wanaag labada waa loo adeegsadaa. Waayadaan dambe ayaa idaacadaha iyo wargeysyada aduunka eraygaan u adeegsadaan dhaleeceen loola dan leeyahay dadka diinta sida adag u heysta ee diidan inay u hogaansamaan dimiqoraadiyada. Waxaa laga yaabaa in dadka badankood ay u arkaan erayga inuu yahay "negative" diidmo ama xumaan. Balse hadii loo qaado meeshuu ka soo farcamay iyo afkaarta uu wato, waa wax qofka Muslim ahi farax galin kara.
Intaas waxaa sii dheer in erayga wahaabi lagu xiriiriyo afkaar khaldan oo mujtamaca iyo jiritaanka horumarka aduunka lid ku ah. Waxaad maqleysaa dugiyada wadamada Muslimiinta waxaa ciyaalka lagu baraa afkaarta wahaabiga "Wahhabi ideology" waxaana maamula xarakooyinka wahaabiga "Wahhabi movement" waa in Muslimka laga joojiyaa waxa loo yaqaan "Wahhabism". Erayada noocaas ah waxaa waayadaan dambe lagu arkaa wargeysyada caalamka. Tafsiirka noocaas ah markii la saaro wuxuu ku soo baxayaa wax dhib u keeni kara dadka. Tan ayaa keentay in dad badan ay diidaan in wahaabi loogu magac daro.
Isticmaalka labaad ee eragya wahaabi ayaa ah in Muslimka lagu kala qeybiyo. Qeybna la yiraahdo waxaad tihiin tabliiq oo diinta uun safar u gala. Qeybna la yiraahdo wahaabi ayaad tihiin oo Muslimka meel-dhaxaadka ah ayaad ka soo horjeedaan, afkaartii qarnigii sadexaad ayaad rabtaan inaad dadka ku xukuntaan. Qeybinta noocaan ah ayaa sababtay in wadamada Islaamka dhul gaar ah, dad gaar ah, iyo calan gaar ah mid walba loo yeelo. Sidaas daraadeen ayaan u arkaa in eray walba oo bixintiisa ama micnihiisa tusaya qeybin in laga fiirsado hadii aan sharax faahfaahsan la raacin. Waxay ila tahay in tafaraaruqa Islaamka aysan ku banaaneyn marka wixii arrintaas keeni kara in la iska ilaaliyo ayaa fiican.
Waxaa igu adag inaan fahmo in dad loo bixiyo wahaabi ayadoon ogahay inaysan jirin mad-had loo yaqaan wahaabi. Koley inta cilmigeyga gaarsiisan wili ma maqal. Dadka raacsan mad-habka Xanbali ama Shaafici, dhib uma arkaan inaad tiraahdid mad-habkaas ayaad raacasan tahay balse hadiii aad magac uga dhigtid dhib ayuu keeni karaa. Sidoo kale, mad-hab aan jirin dad laguma tilmaami karo. Waagii aan dugsiga qur'aanka dhigan jiray ayaa macalinkeyga iyo masjidka dariska nala ahaa lagu xaman jiray "Qaadiriya" ama "Saalixiya" ama "Axmadiya" balse ma maqal macalin ama sheikh leh cinwaankaas ayaan sitaa. Waxaan u arkaa inay malo-awaal iyo iska yeelyeelid tahay in Sheikh caalim ah lagu tilmaamo "Aabihii iyo saldhigii Wahaabiyada" Tan waa nasiib daro balse waxaan leeyahay Alle ha na garansiiyo mudnaanta culumad geeriyootay, dambigooda ha dhaafo, hana ka abaal mariyo cilmigey na bareen. In qof loogu magac daro wahaabiya maadaama uu Sheikh Maxamed Ibn Cabdiwahaab kutubtiisa bartay waxey la mid tahay in qof loogu magac daro "Ibn Taymiya" maadaama uu cilmiga ka bartay kitaabada sheikhaas ama "Al-Sudays" maadaam uu sheekhaas ka bartay quraanka, ama "Ali Suufi" maadaam uu tajwiidka ka bartay Sheikh Cali Suufi. Waa arrin amakaag keenta.
Waxaa haboon in la iska eego erayga la isticmaalayo iyo micnaha ka danbeeya. Tusaale ahaan, siyaasiyiinta reer galbeedka waxaa la sheegaa inay labo u qeybsan yihiin, liberal iyo conservative. Erayga liberal eray xun ma aha balse idaacadaha ayaa ka dhigay. Sidaas daraadeed siyaasiyiin badan ayaa diida in lagu sifeeyo liberal. Waxay jecleyihiin in lagu sifeeyo erayga “progressive” Xizbiga dimiqoraadiga iyo siyaasiyiintiisa ayaa sheegta inay yihiin xizbi progressive ah. Kuwa ka soo horjeeda ayaa ku xanta oo ku eedeeya inay yihiin “liberal party” Labada eray liberal iyo progressive wey isu macno dhow yihiin. Laakiin markii qof lagu sheego liberal, micno iyo afkaar gaar ah ayey xambaarsan tahay. Marka waa muhiim qofka calaamada "label" lagu tilmaamayo inuu ku sifaysan yahay amaba uu raali ka yahay iyo in kale.
Waxan ku soo gabagabeynayaa in aynaan eray walba isticmaalin anagoon fahasaneyn wuxuu magac u yaal u yahay. Waxaan rajeynayaa in qoraalkeyga uusan noqon mid dhaliya tafaraaruq ama abuura caadifad. Hadii ay taas dhacdo, raali ka noqo waa aragtideyda. Talo iyo wax tusba waan soo dhaweynayaa ee emailka hoose igala soo xiriir.